शेयर बजारमा आज अन्योल
काठमाडौं, साउन २७ : नेप्से परिसूचक ० दशमलव १३ अंकले वृद्धि भएर नेप्से परिसूचक १२३३ दशमलव ८५ को विन्दुमा पुगेको छ। सोमबार दोस्रो बजार परिसूचकमा ० दशमलव ०१ प्रतिशतकोे गिरावट देखिएको छ।
दोस्रो बजार १२३४ दशमलव ६८ को विन्दुमा खुलेको थियो भने १२३६ दशमलव ९० को उच्च विन्दुसम्म पुगेको थियो। आज बजारको न्यून विन्दु १२३२ दशमलव ०८ थियो। आज ३१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।
आज सबैभन्दा धेरै रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर किनबेच भएको छ। रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडको २ करोड ५६ लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।
आज नाडेप लघुवित्तका शेयरधनीले सर्वाधिक ९ दशमलव ८९ प्रतिशतले कमाए भने विशाल बजार कम्पनीका शेयरधनीले सर्वाधिक ५ दशमलव २६ प्रतिशतले गुमाए।
दुई कारोबार दिनअघिको विश्लेषणको निष्कर्ष अनुसार यदि बजार १२३७ भन्दा तल स्थिर रहेमा बजार अझ केही सच्चिन सक्ने संकेत गर्दछ भनिएको थियो। हाल १२३७ सामान्य प्रतिरोधको रुपमा परिणत भइसकेको छ र आज बजारले यो प्रतिरोधलाई सामना गरेको थियो।
चित्र नं १, नेप्सेको दैनिक मैनबत्ती प्रवृत्ति अनुसार बजार १२३७ को टेवा क्षेत्रभन्दा तल रहेको देखिन्छ। आजको मैनबत्तीले डोजी आकृति बनाएको छ। यसले बजारमा लगानीकर्ताहरु अन्योल अवस्थामा रहेको संकेत गर्दछ। आजको परिमाण भने सामान्य रहेको संकेत गरेको छ।
चित्र नं.२, पाँच मिनेट समयावधिको हो। विगत दुई कारोबार दिन अघिदेखि घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको बजार आज प्रवृत्तिहीन देखिन्छ। यसले बजारमा विक्रेताको चाप कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्दछ।
आज बजार प्रवृत्तिहीन रहेकाले २१ र ५० समयावधिको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)हरुले दिएको संकेत प्रभावकारी देखिँदैन। आज रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई) ५१ दशमलव १९ अंकमा रहेको छ। यसको प्रवृत्तिले कारोबारको अन्तिम समयमा क्रेताको चाप रहेको संकेत गरेको छ। स्टोकास्टिक अक्सिलेटरले बजार केही समयका लागि सकारात्मक हुन सक्ने संकेत गरेको छ।
निष्कर्ष : माथि उल्लेखित छोटो समयका नेप्से प्रवृत्ति र सूचकले मिश्रित संकेत गरे पनि समग्रमा हेर्दा यदि बजार १२३७ भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार केही सकारात्मक हुन सक्ने संकेत गर्दछ। अर्को तत्कालीन प्रतिरोध १२५० मा रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी, यदि बजार १२३० भन्दा तल स्थिर रहेमा बजार अझ केही सच्चिन सक्ने संकेत गर्दछ।
Published Date: Monday, 12th August 18:19:58 PM
निरन्तर पाँच दिन बढेको शेयर बजार अब के होला?
शेयर बजार आज पनि सकारात्मक, अब के होला?
शेयर बजार आज केही सकारात्मक, अब के होला?
शेयर बजारमा आज पनि उतारचढाव कम
बजार ‘इन्ट्राडे हाई’ मा बन्द, अब के होला?
के शेयर बजार लयमा फर्किएकै हो?
शेयर बजार लगातार ओरालो बाटोमा
शेयर बजारमा आज विक्रेता हाबी
आज शेयर बजारमा पुन: विक्रेता हावी